RAVALOMANANA MARC : NANOME FITAOVANA NY TVM SY RNM AHO TAMIN’IZAY FA TSY MILAZA HOE ALAIVO NY LICENCE MBS – MyDago.com aime Madagascar
RAVALOMANANA MARC : NANOME FITAOVANA NY TVM SY RNM AHO TAMIN’IZAY FA TSY MILAZA HOE ALAIVO NY LICENCE MBS
Nihaona tamin’ny mpanao gazety ny maraina teo teny amin’ny trano fonenany teny Faravohitra ny filoha Ravalomanana Marc. Ankoatra ny fitantarany ny diany tany ivelany, dia nanana ny nambarany ihany koa ny tenany momba ny fizotry ny raharahampirenena ankehitriny. Nisy horanan-tsary natao tany Copenhague momba ny fiainan’ny filoha Ravalomanana. Ny tao Paris dia nambarany fa nivory tao amin’ny AIMF na fikambanan’ireo ben’ny Tanana iraisam-pirenena amin’ny maha mpanolontsaina ahy ny ben’ny tanana.Tsara hoy izy ny ben’ny Tanana maka antoka amin’ireo fikambanana iraisam-pirenena mba tsy hisy hanozongozona ny toerana.Tafiditra ao anatin’ireo ben’ny Tanana zato eran-tany natao tany Colombie ny ben’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra.Raha misy zavatra mitranga aminy ao no miresaka. Tany Bruxelle dia ny raharaha momba ny zavamisy eto Madagasikara.Noresahako hoy izy fa tsy mety loatra ny tsy fahafahako miteny sy ny tsy fisokafan’ny Mbs. Nanao taratasy mihitsy ny tenako tamin’ny 21 Martsa 2011 tany amin’ny “cour d’appel” no nangatahana hoe inona no tsy handefasana io.Misy mamaly amin’ny vava fotsiny momba io, efa nomenao ny fanjakana tamin’ny 2009. Tsy izay ilay izay fa ny tena marina dia tsy ampy fitaovana tamin’izay fa may ny teny amin’ny TVM sy Rnm dia nanome fitaovana aho tamin’izay fa tsy milaza mihitsy hoe alaivo ny licence Mbs. Efa niresaka tamin’ny filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina ny tenako, raha tsy sokafana ny Mbs tsy manana fahafahana hiresaka. Nanaiky izy fa ho jerena akaiky, nefa hatramin’izao tsy mbola nisy. Efa nisy ihany koa ny firesahana tamin’ireo fikambanana iraisampirenena hoy izy.Hangataka fihaonana amin’ny filohan’ny Repoblika ny tenako hoy ny filoha Ravalomanana.
Handefa depiote avy amin’ny Acp hijery akaiky ny zavamisy eto indrindra ny momba ny Mbs.Nanamafy tamin’ireo fikambanana iraissam-pirenena ny tenako hoy ny filoha Ravalomanana fa hilatsaka ho fidiana amin’ny fifidianana filohampirenana amin’ny 2018. Momba ny fampiatoana ny ben’ny Tanana dia nambarany fa miainga amin’ny mpanolontsaina kaominaly aloha, rehefa ireo hitondra-dry zalahy mallette ary anona ary dia mitovy amin’ny sasany, avy eo manongana ny ben’ny Tanana. Tsy ekeko ny fanonganana ben’ny Tanana satria izaho efa ben’ny Tanana.Ny tena hiarovako azy no nampidirako azy amin’ireo fikambanana iraisam-pirenena. Momba ireo taratasy ampiasaina eny anivon’ny kaomina dia nambarany fa misy ny fandefasana izany any amin’ireo fikambanana iraisam-pirenena. Tsy miady amin’ny fitondrana isika.Momba ny fampiharana ny lalàna momba ny fampihavanana. Tena mampirisika amin’izany ny vondrona Eoroepana, ny Amerikana ….
Tokony miresaka aloha dia mifandresy lahatra. Alohan’ny fifidianana no tokony hanaovana ny fampihavanana.Mikasika ny fisamborana an-dRamatoa Razaimanana Claudine dia nambarany fa te hampiseho fa mahavita azy ny mpitondra, ary misy ihany koa ny manodidina mampirisika azy. Te hanao ezaka ry zareo. Mahita ao fa efa ela be iny nosamboriny dia efa azony fa mety misy hifandraisany amin’ny raharaha Singapour iny.
Ravalomanana Marc : nihaona tamin’i Simao sy ny Ambasadaoron’i Afrika Atsimo
RAVALOMANANA MARC : NANOME HASINA NY TANINDRAZANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 4 avril 2017 Catégories Politique
Précédent Article précédent : MAGRO BEHORIRIKA : SOKAFY NY MBS FA AZA FAHANANA LAINGA NY VAHOAKA
Suivant Article suivant : Me RAZAFIMANANTSOA HANITRA : MANDOTO NY ENDRIKY NY FIRENENA NY MPITONDRA ANKEHITRINY